black-box ဆိုတာ ဘာလဲ? ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Author: lubo601 | 10:00 AM | No မှတ်ချက် |
Cloud Cuckoo Land shared အဖြူရောင်စာမျက်နှာ's photo.
လေယာဉ်ပျံတစ်စင်းရဲ့ မှတ်တမ်းတင် ကိရိယာ Black-box Written by ကိုအောင်ချမ်းမြေ့
အောင်ချမ်းမြေ့ (ကို Osaung) ဗဟုသုတ ရနိုင်စေရန်အတွက်သာ ရည်ရွယ်ပါတယ်...
Zaw Mintun Zawmintun